Orinasa afakaba dimy: mamokatra sarom-bava 150 000 isan’andro vidin’ny fanjakana | NewsMada
Orinasa afakaba dimy: mamokatra sarom-bava 150 000 isan’andro vidin’ny fanjakana
150 000 sarom-bava isan’andro no vokarin’ny orinasa afakaba dimy eto Antananarivo, fanehoana fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina miatrika ny valanaretina Covid-19. Ny faran’ny herinandro teo, nitsidika ireo orinasa ireo ny filoha Rajoelina sy ny minisitra Rakotomalala Lantosoa. Tamin’izany nilazana fa hovidian’ny fanjakana ireo sarom-bava vokarina eto an-toerana ireo ary hozaraina maimaim-poana isan-tokantrano. Misy koa anefa ny hamatsiana ireo toeram-pivarotana sasany.
Manaraka ny fepetra rehetra iraisam-pirenena takiana amin’ny akora sy fomba fanaovana izany sarom-bava izany. Izay ihany koa ny afahan’ireo orinasa ireo mihodina sy mitazona ny mpiasa ao aminy amin’izao vanim-potoana sarotra izao. Amin’izay sarom-bava izay ihany, orinasa roa, Aquarelle sy Tropic Knits, samy nanome 50 000 sy 10 000.
Etsy an-daniny manohana betsaka ny minisitera (Mica) mpiahy azy ireo sehatra tsy miankina hatramin’ny nilazan’ny fanjakana fa ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana ny eto Madagasikara. Nanampy ny minisitera ny Star, nanome rano 3 000 tavoahangy ; Enduma, nanolotra milina efatra fanjairana gonim-bary ; Globe, Ts’Art Vintana, Haojues Motors, nanome vary 5 t ho an’ny minisitera. Nanampy ny Mica amin’ny fampitaovana ireo mpiasa, ny Vaniala, Agrim, Pharmacie Principale, Gehem, Groupe Basan, ary ny Groupe Habibo.